Mandeha handany ny fialan-tsasatra ao amin'ny Emira Arabo Mitambatra , ny mpizahatany rehetra dia liana amin'ny toetra sy fomban-drazana eto amin'ity firenena tokana ity. Miomana amin'ny fahatsapana tsy hay hadinoina sy ny tsy ampoizina foana, satria hoy izy ireo: "Ny raharaha atsinanana dia raharaha mafonja."
Inona no tokony ho fantatry ny mpizaha tany momba ny ambiny ao amin'ny UAE?
Ny fitsangatsanganana eto amin'ity firenena ity dia azo lazaina ho toy ny tena paradisa ho an'ny mpivarotra amidy sy gourmets, mpanararaotra sy mpankafy tafahoatra. Misy fivarotana avo lenta, fotsy fotsy, hotely tsara indrindra eran-tany , tranombakoka maro, zaridaina , sns.
Ny fialantsasanao any UAE dia ho feno fitsangatsanganana isan-karazany sy harena an- kalamanjana . Ny mpizaha tany dia mandray foana eto, noho izany dia miantoka ny atmosfera am-pirahalahiana sy am-pirahalahiana, ary koa ny fiarovana tanteraka, raha tsy manitsakitsaka ny lalànan'ity firenena silamo ity ianao.
Ho an'ireo mpizahatany mikasa ny hanao fialantsasatra any UAE, dia misy ireto torohevitra manaraka ireto:
Tsy ara-dalàna ny fandefasana eto. Na dia tsy "tapitra" sombin-taratasy iray aza ianao, dia afaka averina $ 130.
Ny polisy eo an-toerana dia afaka manamarina ny antontan-taratasy avy amin'ireo mpizahatany amin'ny fotoana rehetra, koa ento miaraka aminao foana izy ireo.
Eo am-panaovana ny UAE dia tsy ekena, ary ny sakafo dia tokony horaisina amin'ny tanana havanana.
Ny mpizahatany dia mila mitandrina amin'ny fakantsary. Eto ianao dia tsy afaka maka sary milina an-tafika, tranobe sheikhs , saina, vehivavy eo an-toerana ary tranom-panjakana.
Karazana fialantsasatra any UAE ho an'ny vehivavy
Rehefa misafidy ny akanjo fitetezana eny an-dalambe ao amin'ny firenena, dia tokony ho tsaroana fa ny fitafiana fohy sy ny fihantsiana dia azo raisina ho fanevatevana. Ny vehivavy dia tokony hisoroka rongony, akanjo marevaka sy dekollete lalina. Ao amin'ny tora-pasika dia ilaina ny manao akanjo maotina na fika.
Tsara kokoa ny tovovavy iray tsy hanomboka fifankatiavana amin'ny lehilahy eo an-toerana, ary mihoatra noho izany aza dia tsy afaka miara-miaina amin'izy ireo alohan'ny fanambadiana. Ho an'izany dia mety ho voasazy ianao, hogadraina na halefa. Ny fisehoana fihetseham-po mihoatra noho ny fahatsapana am-pirahalahiana eny an-kalamanjana ao amin'ny firenena dia voarara.
Ny fotoana tsara indrindra hialana amin'ny UAE
Ny fanjakana dia tarihin'ny toetr'andro maina. Matetika no misy tafio-drivotra. Ny fialan-tsasatra any UAE amin'ny ririnina dia maneho amin'ny toetr'andro mafana sy malefaka. Ny hafanain'ny rivotra dia miovaova amin'ny 20 ° C hatramin'ny 30 ° C ary miankina amin'ny toerana. Tsy voatery hipoitra ny ala honko, fa amin'ny alina any an'efitra dia mety hahatratra 0 ° C ilay tsanganana.
Ny fialan-tsasatra any amin'ny Emirà Arabo Mitambatra amin'ny fahavaratra dia manaraka ny hafanan'ny rivotra avy amin'ny 40 ° С mankany + 50 ° С. Avy any an'efitra, rivo-mahery mahatsiravina, ary ny haavon'ny rivotra dia 85%. Ny rano amin'ny volana Aogositra dia azo hafanana hatramin'ny 35 ° С.
Mba hamaliana ny fanontaniana momba ny fotoana hanombohan'ny vanim-potoana any amin'ny Emirà Arabo Mitambatra amin'ny fialan-tsasatry ny torimaso ary ny volana isam-bolana no tsara indrindra ho an'ny famangiana. Amin'ny ririnina, dia mety hidina hatramin'ny 17 ° C ny rano, ary ao anaty lakaly - hatramin'ny 26 ° C. Amin'izao fotoana izao dia ho afaka hivezivezy manerana ny firenena ianao. Amin'ny lohataona sy ny fararano, ireo mpizahatany dia efa milomano mangina ao anaty ranon'ny Persiana sy ny Hoala Omani.
Ny fotoana mahafinaritra indrindra amin'ny fitsaharana any Emirà Arabo Mitambatra dia ny vanim-potoana hatramin'ny fiandohan'ny Oktobra ka hatramin'ny faran'ny volana Aprily. Aza adino ny mitondra satroka sy solosaina, ary tadidio fa azonao atao ny milentika eny amoron-dranomasina alohan'ny 11:00 sy aorian'ny 16:00.
Iza no maniry hifidy fialan-tsasatra any UAE?
Mba hahalalanao hoe aiza no tsaratsara kokoa hialana amin'ny fialantsasatra any UAE, hevero ny toetran'ny emirate tsirairay. Samy manana ny toetrany manokana izy ireo amin'ny endriky ny tora-pasika, tranom-bakoka sy tranom-panjakana. Ny faritra dia samy manana ny toerany amin'ny toerana sy ny konservatisma.
Raha tsy afaka manapa-kevitra ny amin'ny faritra hofidiana ianao, dia fantaro fa ho amin'ny andro fialantsasatra mahazatra ao UAE dia hifanaraka amin'ireo emirate 7 rehetra:
Ireo dia toeram- pizahantany miaraka amin'ny trano fandraisam-peo tany am-piandohana ary toeram-pialam-boly miavaka, trano fandraisam-bahiny sy trano fisakafoanana. Ny ankamaroan'ny firenena misokatra dia tafiditra ao amin'ny Guinness Book of Records ho hany iray amin'ny karazany tahaka azy eto amin'ny planeta.
Ny faritra malaza sy lafo indrindra amin'ny fialam-boly any UAE dia Jumeirah . Tonga eto ny ologarka sy ny mpilatsaka an-tapitrisany, noho izany na dia ny toerana ao amin'ny metro eto dia manavaka ny fandraisam-peo azy ary maneho ny zavakanto.
Raha manapa-kevitra ny hisafidy ny hanao fialantsasatra ao amin'ny United Arab Emirates Dubai ianao, dia hisambotra ireto sary ireto ny sarinao:
Burj Khalifa no tranobe avo indrindra eran-tany, ny haavony dia 828 m;
Loharano mozika dia firafitry ny rano, feo ary hazavana.
Aquarium - ranomasina lehibe indrindra eto an-tany;
Burj Al Arab - hotely amin'ny endriky ny sambo iray, miorina amin'ny nosy artificielle amin'ny 270 m miala ny morontsiraka.
Raha te handany andro fialan-tsasatra any UAE ianao, dia mandehana any Abou Dhabi na Sharjah. Eto ireo mpizahatany dia afaka mankafy marika mampiavaka ireo trano maizim-be mandrakotra ny valan-javaboarim-boribory mafana, midera tsangambato manan-tantara na fikarohana ara-dokotera, ary mitsidika ny Sir-Bani-Yas .
Ny toerana tsara indrindra hialana amin'ny UAE
Ny ankamaroan'ny mpandeha dia tonga eto amin'ny firenena mba hikolokolo ny masoandro ary hividy ny ranomasina, noho izany dia manontany ny toerana misy ny fialan-tsasatra mahafinaritra indrindra any UAE miaraka amin'ny tsy manan-janaka. Ny morontsirak'io fanjakana io dia sasatry ny biriky roa. Ny tsirairay amin'izy ireo dia manana ny toetrany sy ny toetrany manokana.
Ny mpizahatany dia tokony handinika ny fizaran-taona sy ny vanin-taona. Ohatra, ny Golf of Oman dia ny Oseana Indianina, izay mety ho an'ny hetsika ivelan'ny AEE. Misy onja mahery matetika eto, mba hahafahan'ny atleta hivezivezy , rivotra na kitesurf. Ao amin'ny faritra maro, ny famandrihana fitaovana dia omena, ary koa ny mpampianatra fanofanana.
Raha tianao ny vakansy miaraka amin'ny ankizy, dia mifidiana tanàna any amin'ireo Emira Arabo, izay voasasa amin'ny Hoala Persika. Ny morontsiraka dia asehon'ny lozam-bolo, ka ny ranomasina dia tony sy mangina. Ny mpandeha eny amoron-dranomasina dia atolotra mba hanao snorkeling na hanidinan'ny mpitaingina bisikilety eny amin'ny pantsy sy ny antsantsa.
Fialan-tsasatra tsy miankina ao Emirà Arabo Mitambatra
Ny hahatongavana any amin'ny fanjakana sy hahazo visa dia mora amin'ny alàlan'ny sampan-draharahan'ny fitsangantsanganana, saingy afaka mandehandeha manerana ny firenena ianao. Mba hanaovana izany, mila manofa fiara ianao na mividiana tapakila amin'ny bisy. Ho an'ny fialantsasatra ao amin'ny Emirà Arabo mitambatra mba hivoaka ho budgetaire dia tokony manaraka ireto fitsipika manaraka ireto ianao:
Mifidiana hotely ao an-tanàn-dehibe;
mitety ny firenena amin'ny alàlan'ny fitateram - bahoaka ;
mividy ny vokatra eny an- tsena na any amin'ny lehibe lehibe
Mialà ao amin'ny UAE
Ireo mpitsidika avy amin'ny CIS, efa zatra mandany ny fialan-tsasatra amin'ny zava-pisotro misy alikaola, dia ho gaga amin'ny lalàna momba ny fandraràna ny alikaola . Azonao atao ny mividy izany any amin'ny toerana manokana sy amin'ny vidiny ambony. Misy sharia henjana ao amin'ny firenena, ohatra, ho an'ny filokana, azonao omena vola an-jatony dolara ianao.
Ny hetsika rehetra ao amin'ny firenena dia mizara ho ara-pinoana sy ara-pinoana. Mankalaza ny fialantsasatra amim-piravoravoana sy amin'ny fotoana lehibe ny vahoaka eo an-toerana. Miara-mikarakara antoko, paradisa sy baolina izy ireo, fehezam-boninkazo, latina ary balaonina. Ny fialan-tsasatra any amin'ny Emira Arabo Mitambatra ho an'ny New 2017 sy 2018 dia hanome fahafinaretana ireo mpizahatany miaraka amin'ny fankalazana lehibe, masoandro mafana ary ranomasimbe. Afaka mandray anjara amin'ny fampisehoana isan-karazany, lotteries, fifaninanana ary mahita rameva mihodina mihitsy aza.
UAE - zava-misy mahaliana momba ny firenena
Arabia Saodita - toeram-ponenana
Fialantsasatra any Oman
Mananihany any UAE
Metro any Arabia Saodita
Blackberry - toetra mahasoa sy fanoherana
Ahoana ny tokony hametrahana tapa-kazo?
Sandwich miaraka amin'ny trondro mena
Symptoms of grippy pigs in children
Dakota Johnson niaiky fa reraky ny fandraisana anjara amin'ny fandriam-pahandroana
Gingiva dia nirehitra
Asilia Banks mamitsaka ny tratran'ny vehivavy